မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးဟာ သူတို့ကာလရှညျကွိုးပမျးနတေဲ့ ဒေ့ါမှနျအသငျးရဲ့ အင်ျဂလနျလူငယျကွယျပှငျ့ကစားသမားဆနျခြိုကို ပေါငျ(၇၂.၉)သနျးနဲ့ချေါယူဖို့ ဒေ့ါမှနျအသငျးနဲ့ သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါပွီ။
ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈကတညျးက ဆနျခြိုကို ချေါယူဖို့ ပုဂ်ဂိုလျရေးသဘောတူညီမှုရခဲ့ပမေယျ့ ဒေ့ါမှနျအသငျးတောငျးဆိုတဲ့ ပေါငျ(၁၀၈)သနျး ပွောငျးရှကွေ့ေးပမာဏကွောငျ့
လကျလြှော့ခဲ့ရပွီး အခုနှရောသီကာလအတှငျးမှာ ဒေ့ါမှနျအသငျးက ဆနျခြိုအတှကျ သတျမှတျထားတဲ့ တနျကွေးကို လြှော့ခပြေးခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ဆနျခြိုကို ပေါငျ(၆၇)သနျး၊ Add-ons ကွေးအဖွဈ ပေါငျ(၈)သနျးဝနျးကငျြနဲ့ ပထမအကွိမျကမျးလှမျးခဲ့ပမေယျ့ ဒေ့ါမှနျအသငျးက ပယျခခြဲ့ပွီး အခုအခြိနျမှာတော့ ပေါငျ(၇၂.၉)သနျးနဲ့ နှဈသငျးအကွားမှာ သဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါ။
ဆနျခြိုဟာ အခုလောလောဆယျ အင်ျဂလနျအသငျးနဲ့ ယူရိုပွိုငျပှဲဆငျနှဲနပွေီး ပွိုငျပှဲအပွီးမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ ဆေးစဈမှုခံယူမှာဖွဈသလို (၅)နှဈစာခြုပျခြုပျဆိုသှားမှာဖွဈပါတယျ။
သတငျးတခြို့ကတော့ ဆနျခြိုဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးမှာ ဒေ့ါမှနျကစားသမားဘဝတုနျးက ရရှိခဲ့တဲ့ တဈပတျ ပေါငျ(၁၀၀.၀၀၀)ပမာဏထကျ (၃)ဆပိုမြားတဲ့လစာငှရေရှိမယျလို့ ဖျောပွနကွေပါတယျ။
အခုဆိုရငျ ဆနျခြိုဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပွောငျးရှကွေ့ေးအမြားဆုံးကစားသမားစာရငျးမှာ ပေါ့ဘာ (ပေါငျ ၈၉သနျး)၊ မကျဂှိုငျးယား (ပေါငျသနျး ၈၀)၊ လူကာကူ(ပေါငျ၇၅)သနျးတို့ရဲ့နောကျ စတုတ်ထမွောကျကွေးအကွီးဆုံးကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါပွီ။
ယူနိုကျတကျအသငျးကို ဆနျခြို ရောကျရှိဖို့ သခြောသှားပွီးတဲ့နောကျ ပရိသတျတှေ စိတျဝငျစားနတော အသငျးမှာ ဆနျခြို ကြောနံပါတျဘယျလောကျဝတျမလဲဆိုတာပါပဲ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီအစတုနျးက ယူနိုကျတကျအသငျး ဆနျခြိုကို ကွိုးပမျးခဲ့တဲ့အခြိနျမှာ ဆနျခြိုဟာ အသငျးရဲ့ဂန်ထဝငျနံပါတျ (၇)ဝတျဆငျခှငျ့ရဖို့ရှိတယျလို့
သတငျးထှကျခဲ့ပမေယျ့ အဲဒီအခြိနျမှာ အပွောငျးအရှမေ့ဖွဈခဲ့ဘဲ ယူနိုကျတကျအသငျးက ကာဗာနီကို ချေါယူခဲ့ပွီး နံပါတျ(၇) ဝတျဆငျကစားစခေဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ကာဗာနီကို နောကျထပျတဈရာသီ သကျတမျးတိုးခဲ့တာကွောငျ့ ဆနျခြိုအနနေဲ့ ကြောနံပါတျ(၇)ဝတျဆငျခှငျ့ရဖို့ တဈရာသီ စောငျ့ရဖို့ရှိနပွေီး တခွား ထငျရှားတဲ့နံပါတျတှကေလညျး လကျရှိမှာဝတျဆငျကစားနသေူတှအေသီးသီးရှိနပေါတယျ။
ဆနျခြိုဟာ အင်ျဂလနျအသငျးမှာ နံပါတျ(၁၇)ဝတျဆငျနပွေီး ယူနိုကျတကျအသငျးမှာ ကြောနံပါတျ(၁၇)က ကှငျးလယျလူ ဖရကျဒျ လကျရှိဝတျဆငျကစားနပေါတယျ။
အခုလောလောဆယျ ယူနိုကျတကျအသငျးမှာ လှတျနတေဲ့နံပါတျတှဆေိုလို့ ၂၀၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၂၂ တို့ လောကျသာရှိတော့ပမေယျ့ တဈခုရှိတာက ယူနိုကျတကျတိုကျစဈမှူးမာစီယဲလျဟာ
အခုအပွောငျးအရှကေ့ာလအတှငျး အသငျးနဲ့လမျးခှဲဖို့ရှိနလေို့ ကာဗာနီက နံပါတျ(၉)ပွောငျးလဲဝတျဆငျပွီး ဆနျခြိုကို နံပါတျ(၇)ပေးမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ . . .
ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီဖြစ်သူ ဆန်ချို နံပါတ်ဘယ်လောက်ဝတ်မလဲ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ သူတို့ကာလရှည်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဒေ့ါမွန်အသင်းရဲ့ အင်္ဂလန်လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားဆန်ချိုကို ပေါင်(၇၂.၉)သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ ဒေ့ါမွန်အသင်းနဲ့ သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါပြီ။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောတူညီမှုရခဲ့ပေမယ့် ဒေ့ါမွန်အသင်းတောင်းဆိုတဲ့ ပေါင်(၁၀၈)သန်း ပြောင်းရွှေ့ကြေးပမာဏကြောင့် လက်လျှော့ခဲ့ရပြီး အခုနွေရာသီကာလအတွင်းမှာ ဒေ့ါမွန်အသင်းက ဆန်ချိုအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ တန်ကြေးကို လျှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဆန်ချိုကို ပေါင်(၆၇)သန်း၊ Add-ons ကြေးအဖြစ် ပေါင်(၈)သန်းဝန်းကျင်နဲ့ ပထမအကြိမ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် ဒေ့ါမွန်အသင်းက ပယ်ချခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာတော့ ပေါင်(၇၂.၉)သန်းနဲ့ နှစ်သင်းအကြားမှာ သဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါ။ ဆန်ချိုဟာ အခုလောလောဆယ် အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ ယူရိုပြိုင်ပွဲဆင်နွှဲနေပြီး ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ ဆေးစစ်မှုခံယူမှာဖြစ်သလို (၅)နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းတချို့ကတော့ ဆန်ချိုဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းမှာ ဒေ့ါမွန်ကစားသမားဘဝတုန်းက ရရှိခဲ့တဲ့ တစ်ပတ် ပေါင်(၁၀၀.၀၀၀)ပမာဏထက် (၃)ဆပိုများတဲ့လစာငွေရရှိမယ်လို့ ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဆန်ချိုဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးအများဆုံးကစားသမားစာရင်းမှာ ပေါ့ဘာ (ပေါင် ၈၉သန်း)၊ မက်ဂွိုင်းယား (ပေါင်သန်း ၈၀)၊ လူကာကူ(ပေါင်၇၅)သန်းတို့ရဲ့နောက် စတုတ္ထမြောက်ကြေးအကြီးဆုံးကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါပြီ။
ယူနိုက်တက်အသင်းကို ဆန်ချို ရောက်ရှိဖို့ သေချာသွားပြီးတဲ့နောက် ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားနေတာ အသင်းမှာ ဆန်ချို ကျောနံပါတ်ဘယ်လောက်ဝတ်မလဲဆိုတာပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအစတုန်းက ယူနိုက်တက်အသင်း ဆန်ချိုကို ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ဆန်ချိုဟာ အသင်းရဲ့ဂန္ထဝင်နံပါတ် (၇)ဝတ်ဆင်ခွင့်ရဖို့ရှိတယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ အပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်ခဲ့ဘဲ ယူနိုက်တက်အသင်းက ကာဗာနီကို ခေါ်ယူခဲ့ပြီး နံပါတ်(၇) ဝတ်ဆင်ကစားစေခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ကာဗာနီကို နောက်ထပ်တစ်ရာသီ သက်တမ်းတိုးခဲ့တာကြောင့် ဆန်ချိုအနေနဲ့ ကျောနံပါတ်(၇)ဝတ်ဆင်ခွင့်ရဖို့ တစ်ရာသီ စောင့်ရဖို့ရှိနေပြီး တခြား ထင်ရှားတဲ့နံပါတ်တွေကလည်း လက်ရှိမှာဝတ်ဆင်ကစားနေသူတွေအသီးသီးရှိနေပါတယ်။ ဆန်ချိုဟာ အင်္ဂလန်အသင်းမှာ နံပါတ်(၁၇)ဝတ်ဆင်နေပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းမှာ ကျောနံပါတ်(၁၇)က ကွင်းလယ်လူ ဖရက်ဒ် လက်ရှိဝတ်ဆင်ကစားနေပါတယ်။
အခုလောလောဆယ် ယူနိုက်တက်အသင်းမှာ လွတ်နေတဲ့နံပါတ်တွေဆိုလို့ ၂၀၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၂၂ တို့ လောက်သာရှိတော့ပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူးမာစီယဲလ်ဟာ အခုအပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွင်း အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့ရှိနေလို့ ကာဗာနီက နံပါတ်(၉)ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ပြီး ဆန်ချိုကို နံပါတ်(၇)ပေးမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ . .